Heshiiska caruurta oo qayb ka noqonaya sharciga Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Avslutande allsång från Unicef-galan i FN:s högkvarter i New York. Foto: Agneta Furvik / Sveriges Radio.
Heshiiska caruurta oo qayb ka noqonaya sharciga Sweden
La daabacay fredag 21 november 2014 kl 13.08
Heshiiska caruurta ee QM ayaa shalay oo khamiis aheyd loo dabaal degay 25 sanno guuriadii ka soo wareegtey markii la aasaasay. Billaha hore ee sannadkan ayaa la filayaa in heshiiskan lagu daro sharuucda dalka Sweden, sida uu shalay ka dhawaajiyey Stefan Löfven ra’iisalwasaaraha Sweden.
Heshiiska caalamig ah ee caruurta waxa weeye qodobo laysku geeyey oo ku sabsan xaquuqul insaanka caruurta. heshiiska cauurta ee QM midoobey waxay waddamada caalamka intooda badan qalinka ku duugeen sanandkii 1990. Waddamo faro ku tiris ah oo ay ka mid yahiin Mareykanka Koonfur Sudan iyo Soomaaliya oo dowladnimadeeda burburtay xilligii heshiiska la hirgeliyey ayaan weli heshiikan saxiixin ama dhaqan gelin. Waddamada intooda badan marki ay heshiixkan saxiixeen waxuu toos uga mid noqdey sharciyadooda. Laakiiin Sweden oo ayada ka mid aheyd waddamada saxiixay heshiiskan sagaashamadii ayaan weli ku soo darin sharuucdeeda. Waxaan taas ugu wacan waddakankan Sweden oo ay jirto nidaam xeer oo labo geesle ah . middaas oo ka micno ah in heshiisyada caalamiga ah si uu uga mid noqdo xeerka dalka la soo marsiiyo xeer dejinta, alyacni baarlamaanka dalka, si uu u noqdo mid la isticmaali karo.
Stefan Löfven markii baarlamaanka dalka ka hior aqrinayey qodbadiisa qorshaha dolwadiisa ayuu ku dhawaaqey in heshiiska caruurta lagu darayo xeerka dalka.
- Waxaan dooneynaa Sweden in ay ahaato waddanka ugu wanaagsan caalamka ee caruurta ku korto. Sidaas daraaded dowladda waxay billaabeysaa howl heshiiska caruurta ee QM loga mid dhigayo sharciga dalka.
Ururka QM ee caruurta Unicef iyo urur kale oo badan ayaa waqti ku hadaaqayey in heshiiska caruurta lugo soo daro sharciga dalka . sannadkii 2013 ayey xukumadii alliansen u saartey guddi soo baara faa’idada iyo iinta uu yeelan karo haddii heshiiska caruurta lagu daro sharuucda dalka. Laakiin weli guddigaas ma soo saarey natiijada baaritaankooda. Wasiiradda caruurta-waayeelka iyo sinaanta Åsa Regnér ayaa qabta in laga soo gudbey baahida ah in baaritaano laga sameeyo heshkiiska caruurta lana joogo xilligii la dhaqan gelin lahaa:
- Ma la joogo xilligii baahida loo qabay baaritaan waxaase la joogaa xilli ay dowladdan dooneyso isbadel . marka damaceeno waxa weeye in aan eego sida heshiiska caruurta looga mid dhigi lahaa sharuucda dalka billaha hore ee snnadka cusub.
Laakiin waxaa jira dhaleeceyn loo jeedinayo xukumadda oo ku sabsan in aysan ka war sugin natiijada baaritaanka guddiga ay u xilsaartey arrintan xukumadii hore ee dalka hormood u aheyd . dadka dhaleeceysan tillbada xukumadda ayaa qaban in heshiiska caruurta ay ku jiraan hadefyo kalo gedisan oo aan u qalmin ay sharciga lagu daro, tusaale waxaa ka mid ah hadefyada nocaas ah mid ku sabsan horumarka moral ee caruurta . laakiin middas waxaan caqab u arag Christina Heilborn oo ah madax sare oo ka tirsan ururka caruurta ee QM Unicef.
- Xeerarka ku jira heshiiska caruurta intooda badan wa kuwo cayiman . laakiin xeerarka kuwooda caamka ah, xataa kuwaas sharci yaqaanado maanta wey isticmaali yaqanaan.
- Waxaan oran lahaa heshiiska caruurta waxuu imminka soo jirey muddo25 sanno ah. Waxaa la joogaa xilligii uu yeelan laha meeqaam sharci ayey tiri.